अनुशासन पालना नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरिने - Arthasansar
मंगलबार, १७ पुस २०७५, १६ : ०३ मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौँ– सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार समायोजनमा नगई आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने भएको छ ।
समायोजन अनुसार सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ समायोजन गरिँदैछ । सरकारले पुस मसान्तभित्र समायोजन सक्ने जनाएको छ । कर्मचारी समायोजन सङ्घीयता कार्यन्वयनको महत्वपूर्ण कडिको रुपमा लिइएको छ । रासस
बैंकमा जागिर खाने सुनौलो अवसर (विज्ञापनसहित)
जागिर खाने हो ? लक्ष्मी लघुवित्तलाई कर्मचारी चाहियो
जागिर खाने हो ? समृद्धि फाइनान्सलाई कर्मचारी चाहियो (विज्ञापनसहित)
जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? लघुवित्तमा काम गर्ने सुनौलो अवसर (विज्ञापनसहित)